Ifektri Yokufakelwa Kwamazinyo | I-China Abakhiqizi Bohlelo Lokufakwa Kwamazinyo, Abahlinzeki
amazinyo amakhulu wesikrini se-LED torque umsindo ophansi wamazinyo wokulawula unyawo wokufaka imoto yamazinyo
1. Intuitive LCD display and control panel, okuletha lula ukusebenza;
2. Imoto yangempela engenamabhulashi engenisiwe, ebonakala nge-torque enkulu, umsindo ophansi, ukungadlidlizi kanye nokunemba futhi kungenziwa inzalo ngokushisa okuphezulu;
3. Enye i-voltage yokufaka yokufaka: AC100-110V noma i-AC220-240V;
4. Iswishi yemilenze eminingi, engasetshenziswanga nje kuphela ukusebenza kepha futhi nokulwa nokutheleleka okubangelwa ukuxhumana phakathi kwezandla nocingo;
5. Ijubane lokushintshanisa eliguquguqukayo, i-torque, ukugeleza kokupholisa nokudlulisela phambili / okungaguqula, okungahlangabezana nezidingo ezahlukahlukene ngesikhathi senqubo yokufaka;
6. Izinhlobo eziyishumi zama-engeli wokulawula ukunciphisa, akwazi ukukhethwa njengoba udinga ukusebenza;
7. Izinhlobo eziyishumi zokuhlelwa kohlelo, ngayinye evumela ukusetha amanani ahlukahlukene ezinombolo zejubane lokujikeleza, i-torque, ukugeleza kokupholisa, ukuhambisa phambili / ukubuyisela emuva noma ukunciphisa isilinganiso sezidingo ezingokoqobo.
amathuluzi okufakelwa kwamathuluzi okufakwa kwamazinyo amathuluzi okuphelele okususa amathuluzi okufakelwa kwamazinyo
1. Isethi yazo zonke izinhlobo zamaDental Trephines ayatholakala
2. Ibanga lezokwelapha insimbi engagqwali
3. 135 ° C I-Autoclavable, ibhokisi lingabuyiselwa inzalo
4. 100% ikhwalithi ephezulu
Umtholampilo Wamazinyo Sebenzisa Ukufakelwa Kwezinto Zokufakelwa Kwamazinyo ngamathuluzi we-Torque Susa Kit
I-Original Switzerland Brushless Surgery Dental Implant Motor COXO Dental Implant Motor System
1. Autoclave Phinda
2. Ubuchwepheshe bangempela baseSwitzerland obuhlinza nge-brushless motor
3. Ukulawulwa kwezinyawo: Ukusetshenziswa kwezinyawo eziningi, kulula futhi okuguqukayo
4. Ukwehliswa kulungiselelwe i-contra angle ngokunisela ngaphakathi nangaphandle
5. Isistimu yokupholisa ehlakaniphile: Ukulawulwa kwezandla nokulawulwa kwezinyawo; Ukupholisa nokugeza kwesiteshi kwangaphakathi nangaphandle; Iphampu lamanzi elithulile nelinamandla; 5 isivinini ukuhanjiswa kwamanzi: 50-100ml / min
6. Isistimu yokulawula ukusebenza okuphezulu: Isikrini esikhulu se-LED; 10 uhlelo lokusetha; Finyelela ukulawulwa kwejubane okungenasinyathelo
ukufakelwa kwamazinyo okufakelwa emotweni inkinobho entsha yokucindezela engu-20: 1 ukufakelwa kwamazinyo okufakelwa kwamazinyo isivinini esiphansi
5. Isistimu yokupholisa ehlakaniphile: Ukulawulwa kwezandla nokulawulwa kwezinyawo; Ukupholisa nokugeza kwesiteshi kwangaphakathi nangaphandle; Iphampu lamanzi elithulile nelinamandla;
6 isivinini ukuhanjiswa kwamanzi: 50-100ml / min
7. Isistimu yokulawula ukusebenza okuphezulu: Isikrini esikhulu se-LED; 10 uhlelo lokusetha; Finyelela ukulawulwa kwejubane okungenasinyathelo
imoto yokufakelwa kwamazinyo enomsebenzi wesandla 20: 1 contra angle handpiece imishini yokufakelwa kwamazinyo imishini yokufakelwa
Ukubuka konke Imininingwane Esheshayo Indawo Yomsuka: Inombolo Yemodeli yaseChina: Imoto yamandla okufakwa kwamazinyo emthonjeni Amandla Umthombo: Iwaranti kagesi: Unyaka ongu-1 Wensizakalo Yokuthengisa: Inkxaso yezobuchwepheshe eku-inthanethi Izinto: I-Acrylic, insimbi, ipulasitiki, i-Resin, ipulasitiki, insimbi Yena ...
i-elite implant yamazinyo iyunithi yemoto umshini oshibhile wentengo yamazinyo ithuluzi lokufaka amazinyo
eshibhile yamazinyo elite yamazinyo yokufaka amazinyo eyunithi yezimoto ngomshini onesivinini esiphakeme
ukufakelwa kwamazinyo uhlelo lwezinjini lokufaka ezomnotho injini ye-LED yokufakelwa kwamazinyo imoto
ukufakelwa kwesistimu yamazinyo elite yamazinyo elite yamazinyo ikhwalithi ephezulu yamazinyo
Ukufakelwa kwamandla kagesi okufakelwa ngogesi kwamandla okufakelwa kwamayunithi wezimoto
Ukubuka konke Imininingwane Esheshayo Indawo Yomsuka: I-China, iSwitzerland Inombolo Yesimodeli: Ukufakwa kwamazinyo motor Umthombo Wamandla: Iwaranti kagesi: Unyaka ongu-1 Wensizakalo Yokuthengisa: Inkxaso yezobuchwepheshe eku-inthanethi Izinto: I-Acrylic, insimbi, ipulasitiki, i-Resin, ipulasitiki, insimbi ...
Abakhiqizi bezimoto ezishibhile abasebenza ngentengo yamazinyo abasebenza ngentengo yemoto yamazinyo